Hi onye obula
Jikọtara: 11 Ọgọst 2017, 12:39
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Leocha1 » 11 Ọgọst 2017, 13:57
Enwere m ebe a ma chọpụta ebe nrụọrụ weebụ a ụnyaahụ.
Maka ogologo oge, m na-eji mpako na-eji 2004 simulator na-agba ọsọ, ma ka nwere ọtụtụ ihe ịchọpụta.
Abịara m gafee ebe a mgbe m gachara maka ụgbọelu freeware kacha mma.
Ọ dị ịtụnanya ihe m hụrụ ebe a.
Ya mere, m ga-achọ ịsị ekele maka nnukwu ụlọ ahịa freeware.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Dariussssss » 11 Ọgọst 2017, 20:53
Otu nnukwu ekele maka okwu ọma niile. Wayzọ m bịara ebe a bịara yie nke gị. Anọ m FSX ugbu a mana ogologo oge gara, Anọ m na FS2004, nke na-adịghị njọ ma ọlị.
Anyị ga-eme ike anyị niile iji nọrọ ebe a dị ka o kwere mee.
Ọzọkwa, ekele gị nke ukwuu ma nabata gị.
Jikọtara: 17 Eprel 2016, 17:37
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Apollo21 » 21 Ọgọst 2017, 10:42
Ọ ga-amasị m ịkele gị maka ihe niile ị na - enyefe, ị na - eji saịtị gị kemgbe ọtụtụ ọnwa, ọ kwesịrị ka m kelee gị tupu ihe ndị ọzọ bụ na oge m nọ na - elele ọdụ ụgbọ elu wdg. n'ofe onye na-ere (ngwa agha ụgbọ elu) ya mere m jiri zitere ya ozi ma jụọ ha n'ezie enwere onwe ha n'ihi na enwere m otu ụgbọ elu ọ na-enye, ma na-eche ma ha bụ n'ezie freeware ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ ọ zara, wee sị na ha bụ ụlọ ahịa n'efu ka ọ sịrị n'ụzọ bụ isi ngwakọ nke freeware na otu mkpọ. Ugbu a nke a ezighi ezi n'anyam, imebi ndi nile cheputara ma bipue ụgbọ elu ndị a.
Ma eleghị anya, ọ bụghị nke m na ahịa ma onwe m eche na ya kpam kpam na-ezighị ezi, M na-enwe obi ike na ọ bụghị iwu ma eleghị anya na ọ bụ amaghị m na m chọrọ ịdọ ndị mmadụ aka banyere nke a niile ugbo elu na disks dị site na Rikoo ma ọ bụ ụfọdụ Nke saịtị ndị ọzọ nbudata.